कतारको चिट्ठामा नेपालीले २ करोड रुपैयाँ र प्राडो जिते | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपालले आज युएईसँग खेल्ने
कसरी भयो क्रिकेटको विकास ? क्रिकेटको नालीबेली… →
कतारको चिट्ठामा नेपालीले २ करोड रुपैयाँ र प्राडो जिते
दोहा, फाल्गुन ४ – खाडी मरुभूमिमा श्रम गर्न आएका नेपालीलाई धेरैले ‘अभागी’ ठान्छन् । तर, त्यसलाई असत्य सावित गरिदिएका छन् जयमंगल यादव र नरबहादुर बस्नेतले । कतारको दोहास्थित सफारी मलको ‘विन वान मिलियन अफर’ को लक्की ड्रमा १० लाख रियाल अर्थात् २ करोड रुपैयाँको पहिलो पुरस्कार भैरहवा रूपन्देहीका जयमंगल यादवलाई परेको छ । दोस्रो पुरस्कार पाउने भाग्यमानी पनि नेपाली नै भएका छन् । ल्यान्ड क्रुजर प्राडो गाडी बाग्लुङ बुर्तिवाङका नरबहादुर बस्नेतले जितेका हुन् ।
एक कम्पनीमा ड्राइभर रहेका यादव ३ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत छन् । घरमा श्रीमती, २ छोरा, १ छोरी र आमाबाबु रहेका उनले पुरस्कार रकम के गर्ने भन्ने घर गएपछि मात्रै योजना बनाउने बताए । अत्यन्त खुसीका कारण ‘अनौठो लागिरहेको’ बताउने यादव टेलिफोनमा राम्रोसँग बोल्न सकिरहेका छैनन् । मध्यम परिवारका उनी छिट्टै घर फर्कने योजनामा छन् ।
३० लाख रुपैयाँ बराबरको प्राडो उपहार पाएका बस्नेत पनि ३ वर्षदेखि नै कतारमा काम गर्दै आएका छन् । भर्खरै बिदा मनाएर आएका उनको घरमा श्रीमती, आमा र बुबा छन् । सन्तान जन्मने अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘मेरो हुनेवाला सन्तान भाग्यमानी रहेछ ।’ गाडी के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कतारमा गाडी चढेर हिँड्ने हैसियत छैन । हातमा पुरस्कार परेपछि योजना बनाउनुपर्ला ।’
सफारी मलले ५० रियालको सामान किन्दा एउटा लक्की ड्र कुपन दिने गरेको थियो । त्यो मंगलबार खोल्दा पहिलो र दोस्रो पुरस्कार नेपालीलाई परेको हो । तेस्रो पुरस्कार टोयोटा क्यामरी, चौथो ५ सय रियालको गिफ्ट भौचर र पाँचौंमा २ सय रियालको गिफ्ट भौचर राखिएको थियो ।